Horta yaa yidhi Qofku Waa Xil ku Nool, danta guud u adeega markuu Xil hayo oo kaliya ?Kaysar Maxamed
Wednesday February 28, 2018 - 12:05:36 in Maqaallo by Reporter Burco
Waxaa jira dad badan oo aaminsan in ay danta guud ama danta Qaranka ka sheeqeeyan marka ay Xil ama mansab dawladeed hayaan oo kaliya ! Waxay aaminsan yihiin inay danahooda gaarka ah ku foofaan marka aanay Xil Qaran haynin ama Xilka laga qaado.
Run ahaan waxaan Aaminsanahay in marka aanu Qofku Xil Qaran haynin uu waxqabad badan muujin karo Dalkiisa iyo Dadkiisana wax badan u qaban karo isaga oo gudanaya waajibkii ka saarnaa dantiisii gaarka ah sida masuuliyadii reerkiisa iyo carruurtiisa iyo waalidkiisa.
Caawa aan yara faanee waxaa Sharaf ii ah inaan Qarankayga u huray naftayda dhiigayguna u daatay Xorayntiisa, Af iyo Addina aanan ka gaabin inaan intii itaalkay ah u shaqeeyo Qarankayga.
Waxaan ku faanayaa sharaf weyna ii ah in mudadii aan ka soo maqnaa Somaliland oo ka yar Saddex Bilood ay ii suurto galeen inaan wax badan u qabto Qarankayga dhawaana aan soo bandhigi doono Insha Allah.
Waxaan ugu baaqayaa Muwaadin kasta oo Somaliland u dhashay inuu fadhiga ka kaco oo uu u hawl galo sidii Qarankiisa uu wax u Tari lahaa. Waxaa Waajiib ah in la midoobo oo gacmaha la is qabsado loona hawl gali lahaa sidii aynu u gaadhi lahayn yoolkeena oo ah Somaliland oo la Aqoonsado Dadweynaheeduna ay ku noolaadaan Cadaalad iyo Sinaan. Waxaa Waajiib inagu ah inaan garab istaagno Xukuumadeena marka ay jidka toosan ku socdaan isla markaasna aynu toosino haddii ay jid khaldan maraan. Muwaadin ka fogow wax kasta oo wiiqi kara Wadajirka iyo Walaalnimada Ummada reer Somaliland, ogsoonow Cadawga aynu leenahay ee u Rabbi tuugaya inay fashilanto yididiilada iyo yuhuunta Shacbiga reer Somaliland.
Ballanteenu waa Hargeisa iyo usbuuca danbe Insha Allah.